i-CaseBoard - Kitendry bateria ho an'ny mini iPad | Vaovao IPhone
Kitendry I-CaseBoard ho an'ny mini iPad
Raha herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanao ny famerenana ho azy isika fitendry ivelany ho an'ny iPad, anio dia tsy maintsy ataontsika ny fandinihana ny zandriny lahy, ny Kitendry i-CaseBoard ho an'ny iPad Mini. Toy ny tamin'io fotoana io, tonga taminay ny kitendry tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera ElectroMedia.
Ny i-CaseBoard dia kitendry misy batterie ivelany izay miantsona iPad Mini tena milamina sy haingana amin'ny alàlan'ny Bluetooth 3.0.
Ny fitendry dia manana refy kely (arakaraka ny haben'ny iPad mini) izay ahafahana mitondra azy tsara. Satria io ihany no maharatsy azy, io habe io dia somary manahirana ny fanalahidy hampiasaina nefa tsy azonao ny zava-drehetra. Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, kitendry espaniola iray manontolo izy io ka omena ireo ilaina foana Ñ ​​lakile. Izy io koa dia manana ny lakilen'ny SHIFT hahafahana mampiasa fitambarana fitendry amin'ny fomba MacBook madio indrindra.
Antsipiriany fitendry I-CaseBoard
Ny mampifandray azy dia tena tsotra. Mila ihany ianao:
Alefaso ny fitendry
Tsindrio ny lakile Connect amin'ny keyboard. Amin'ity dingana ity dia hanomboka hiparitaka ny mari-pamantarana Bluetooth hampahafantatra antsika fa vonona izy.
Ao amin'ny iPad dia mandehana any amin'ny Settings> General> Bluetooth ary kitiho ny fitaovana «Bluetooth Keyboard for iPad Mini»
Ampidiro ny lakile asehon'ny iPad Mini amin'ny kitendry ivelany
Ary vonona handeha ianao
Amin'ny maha-fanamarihana lehibe azy, na dia natao ho ampiasaina amin'ny mini iPad aza izy io, dia ny keyboard ihany koa dia mifanaraka amin'ny iPhone ary ny iPod Touch. Mety ho fampiasana mahaliana izany raha mampiasa iPhone hanoratanao mailaka ianao ary te hampitombo ny hafainganana amin'ny fomba tsotra.
El vidin'ny keyboard miaraka amin'ny batterie ho an'ny mini iPad dia avy any 39,90 € ary azonao vidiana ao amin'ny ElectroMedia amin'ny Ity rohy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » i-CaseBoard, fitendry miaraka amin'ny bateria ho an'ny iPad Mini
Andao hojerentsika, ao amin'ny tranonkalan'ny mpivarotra dia tsy asehon'izy ireo fa batterie ivelany izy io, ary hoy ianao fa mampifandray amin'ny Bluetooth (fa tsy amin'ny tselatra). Mba haharatsy ny raharaha dia milaza ianao fa ny faharetana dia mitombo «55 am-perinasa ary 60 andro am-piandrasana», izay mifanentana amin'ny 55 ora ampiasaina ary 60 andro amin'ny fiandrasana NY KEYBOARD, natoron'ny mpivarotra.
Ny hevitro dia hanana izany ianao, saingy mbola tsy nanandrana akory.
News Blog dia hoy izy:
Azafady, marina ny anao. Tianay ny milaza fa ny batterie dia manana batterie anatiny (hampiasaina) ary ny faharetany dia 55 ora fampiasana ary 60 andro fiandrasana. Tsy batterie ivelany io fa hadisoana rehefa namoaka ilay lahatsoratra.
Valiny amin'ny Blog Blog
Toa tsara izany: $
Andao hojerentsika raha toa ka manome azy toy ny charger iPhone 5 😛 !! 🙂
Manana ny kinova Anglisy an'ity fitendry ity aho (farafaharatsiny, ny boaty sy ny kitendry dia mitovy amin'ny sary, ny soratra voasoratra eo amin'ilay boaty ihany no tsy mitovy ary ny marika i-CaseBoard dia tsy miseho na aiza na aiza). Mampiasako azy tsy tapaka amin'ny iPhone 4 ary tsy manana olana aho: tsy te hampiasa keyboard iPhone satria bitika izy ireo ary tsy mamaha na inona na inona ho anao; tsy iPad iray koa satria hitako fa lehibe loatra izy ireo; Etsy ankilany, ity iray ho an'ny iPad Mini ity dia ny halehibeny mety hitondrana azy amin'ny fomba milamina sy mitovy amin'ny fanoratana toy ny klavier feno (tamin'ny voalohany dia nametraka dian-tanan-tànana izy ireo fa efa zatra izany, dia izay).
Mikasika ny fitsinjarana Espaniola ny lakile, dia toy ny amin'ny klavan'ny solosaina ihany: mizara ny lakile ny rafitra fiasa ary na dia tsy manana ny Ñ nosoratana aza izy dia lasa «next» ny lakile eo akaikin'ny «L» ary raha izaho dia nanana raha hametaka sticker eo amboniny (na izany aza, tokony ho niandry aho nividy azy hahazoana ilay kinova espaniola XD).
Na izany na tsy izany, te-hilaza fotsiny aho fa tena ahazoana aina ny klavier ary miasa amin'ny iPhone na iPad izy ary azo antoka fa amin'ny fitaovana hafa izay manaiky ny kitendry amin'ny Bluetooth.
Salama. Ity kitendry ity dia nofonosina miaraka amin'ny fanalahidy »ñ» ??? Ny tiako holazaina dia hoe, raha Espaniôla ny fitendry. Satria matetika izy ireo no manompo amin'ny ankapobeny, dia ny Amerikanina no tiako holazaina. Ho ahy dia ilaina ny manapa-kevitra ny hividy azy.
Hitako amin'ny sary izany ... ary hoy ihany izy ireo ENY 😉
M_AN dia hoy izy:
Novidiko ity fitendry ity ary tsy misy fomba hampifandraisana azy.
Niezaka ny nampiditra azy io hatrany aho. Miaraka amin'ny tariby izay misy ary misy iray hafa izay ananako ...
Tsy mandeha ihany ny jiro jiro volom-boasary raha omeko fahefana izany. Amin'ny fotoana tapakaiko dia tsy misy jiro na mandeha na tsia ary mazava ho azy fa tsy mandeha ny jiro na mirehitra mihitsy.
Misy zavatra azoko atao ve sa tsy mety ity fitendry ity.
Valio amin'i M_AN
LockMemos: fampahatsiahivana eo amin'ny efijery hidin-trano (Cydia)
CameraMator: ny fifandraisana tonga lafatra misy eo amin'ny fakantsary DSLR sy iPhone